स्कुल / कलेज Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - रु १० मै कपडा बिक्री, आम्दानीबाट विद्यालय सञ्चालन
ललितपुर । के तपाइँ एक पटक प्रयोग गरिसकेको वा प्रयोगमा नआएका लत्ताकपडा, पुस्तक, स्टेशनरीका सामग्रीहरु कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्यामा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए होस्टेहैंसे नामक संस्थालाई खबर गरिदिनुहोस् । संस्थाका स्वयंसेवकहरुले ती सामग्री लगेर बिक्री गरी त्यसबाट हुने आम्दानीले गरीब, अनाथ, बालबालिकालाई अध्ययनको खर्च जुटाइदिन्छन् । सो संस्थाले यसरी नै सङ्कलन गरेका सामग्रीहरु बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट विगत चार वर्षदेखि सर्लाही जिल्लामा चार वटा विद्यालयको स्थापना गरी दुई हजार विद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक तहसम्म अध्ययनको अवसर प्रदान गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने अभियान कर्णालीमा सुरु
सुर्खेत । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँको इम्पेटस टक्नोलोजी नेपाल प्रालिले कर्णाली प्रदेशमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ । प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक जीवन गुरागाईंले शैक्षिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गर्न नयाँ सफ्टवेयरको विकास गरिएको बताए । “हामीले सूचना प्रविधि प्रयोग गरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने पद्धति विकास गरेका छौँ”, उनले भने, “परम्परागत शैक्षिक पद्धतिलाई आधुनिक प्रविधिबाटै अनुगमन गर्छौँ ।	थप पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री नै शिक्षा सुधारका बाधक नेपाल बहस डेस्क काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दल, सांसद र नेताहरुले निजी विद्यालयलाई व्यापारिक माध्यम बनाएर लुट मच्चाइरहन उच्च शिक्षा आयोगमै चलखेल गरेको पाइएको छ । सरकारले आयोगको म्याद सुटुक्क पारेर ३७ दिन थप्नुका पछाडी यसको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयबारे स्पष्ट ‘स्वार्थ’ राख्न खोजिएको पाइएको हो । शिक्षा मन्त्रालय श्रोतका अनुसार निजी विद्यालय राख्ने की हटाउने भन्ने विषयमा आयोगले प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेख्नुपर्नेछ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । ललितपुर, प्युठानस्थित कालीदेवी मावि कक्षा ८ का विद्यार्थी दर्शन गौतम तीन दिन स्कुल आएनन । मंगलबार आए तर, असहज मान्दै । कारण खोतल्दा थाहा भयो — गािणत शिक्षक बज्रकिशोर शाहले गृहकार्य नगरेको भन्दै उनलार्य १८० पटक उठबस गर्न लगाएछन् । १५० पल्टसम्म उठबस गरेका दर्शन त्यसपछि बेहोस भए । यो थाहा पाएलगत्तै प्रधानाध्यापक ठाकुर भलामा दौडदै पुगे । कसैले दर्शनलाई हम्किन थाले, कसैले पानी छम्किए । झन्डै आधा घण्टापछि उनको झन्डै उनको होस फिर्यो । हाफ छुट्टीमा दर्शनलाई नजिकैको स्वास्थ्यचौकी लगियो । विद्यालयले घटना गुपचुप राख्न खोज्यो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने समय पुनःथप गरेको छ । बोर्डले एक सूचना जारी गदै रजिष्ट्रेशन आवेदन फाराम भर्ने म्याद थपेको हो । निर्धारित समयमा धेरै विद्यार्थीको फाराम भर्न छुटेको भन्ने गुनासो आएपछि भर्ने म्याद पुनःथप गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
८० प्रतिशत शिक्षक हाजिर गर्दै, टाप ठोक्दै !
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीबीच बोलीचालीमा एउटा शब्द प्रचलित छ– हाटा । हाटा अर्थात् हाजिर गर्दै, टाप ठोक्दै । बोलीचालीमा मात्रै होइन, व्यवहारमा समेत कर्मचारीले हाटा गर्छन् । काठमाडौं महानगरमा त ८० प्रतिशत शिक्षक हाटा पाइएका छन् । महानगरको शिक्षा विभागले गरेको अनुगमनमा सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक कक्षामै अनुपस्थित भेटिए । महानगरभित्रका केही सामुदायिक विद्यालयमा हाजिर गरे पनि विद्यार्थी नपढाएको भेटिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
सल्यान । वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएपछि पठनपाठन प्रभावित भएको छ । नगरपालिकाले विगत पाँच महीनादेखि तलब उपलब्ध नगराएको भन्दै नगरपालिकाभित्रका शिक्षक आन्दोलित भएपछि पठनपाठन प्रभावित भएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबीच भएको विवादका कारण हालसम्म नगरपरिषद् हुन नसकेपछि शिक्षकलगायत नगरपालिकाका कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । आफूहरुले पटकपटक नगरपालिकामा आफ्नो समस्या राखे पनि सुनुवाइ नभएपछि पेनडाउन गरेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको शिक्षकहरुले बताएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 'एसईई' आउँदो चैत १० गतेदेखि गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको बोर्डको बैठकले नियमित, ग्रेडवृद्धि तथा प्राविधिकतर्फको माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा चैत १० गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको हो । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने बोर्डले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
पुर्जा परिवारले दिए विद्यालयलाई २ लाख ५० हजार !
म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चेस्थित देउराली आधारभूत विद्यालयलाई एक परिवारले दुई लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको छ । पोखराको अर्घौलाई कर्मथलो बनाएका उक्त स्थानका कुमबहादुर पुर्जाको परिवारले विद्यालयमा स्थापित अक्षयकोषमा शुक्रबार रु दुई लाख ५० हजार प्रदान गरेको हो । गाउँ छाडेर गएको ३८ वर्षपछि जन्मथलोमा आउनुभएका पुर्जाले त्यहाँस्थित देउराली आमा समूहलाई रु ५० हजार पनि प्रदान गरेका थिए । सहयोगदाता पुर्जाका परिवारलाई स्थानीय आमा समूह, बाबा समूह, विद्यालय र युवा क्लबले सम्मान गरेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
सन्ध्या र साधनाले पाए शैक्षिक अभिभावक
गलेश्वर । कलेजो र पित्तथैलीमा क्यान्सर भएर ज्यान गुमाएकी बेनी नगरपालिका–२ खवरा दारिमपाटाकी ३५ वर्षीया सीता केसी घिमिरेका दुई छोरीले शैक्षिक अभिभावक पाएका छन् । गत महीना आमाको मृत्यु भएपछि १३ वर्षीया सन्ध्या र आठ वर्षकी साधना घिमिरेको जीवनयापनमा समस्या भएकाले शुरू गरिएको सहयोग अभियानमा शैक्षिक साम्रगी, झोला, स्कूल पोशाकका साथै प्लस टूसम्म अध्ययनका लागि उनीहरूले शैक्षिक अभिभावक पाएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्